Omenala ụlọ ọrụ & akụkọ ihe mere eme - Quanzhou Jinjia Machinery Co., Ltd.
Ifufe Ifufe Na -aga n'ihu Asọmpi
Ulo oru nta na nke obere, na ebili mmiri na-alụ ọgụ, ndị Hongda na-agbaso omume dị mma, ọsọ siri ike, na-agafe Quanzhou amamihe oge ochie na agwa nke ezigbo nka maka teknụzụ dị nkọ, na-atụgharịgharị '' enweghị mmeri '' nke mmụọ.
N'ịbụ ndị chere ihe ịma aka ọhụrụ na njem ọhụụ, na mmụọ nke ihe ọhụrụ na ịrụsi ọrụ ike, anyị ga -eburu ụgbọ mmiri maka mmeri n'ahịa nke akụkụ ndị dị n'okpuru ime maka igwe ihe owuwu wee jiri nkwuwa okwu gaa n'ihu.
Onye prọfesọ Businesslọ Akwụkwọ Azụmaahịa Harvard na -ekwu, n'oge gara aga ịhụ arụmọrụ ụlọ ọrụ naanị iji hụ akwụkwọ ahụ, yana ugbu a karịa maka ọdịbendị ụlọ ọrụ na ijikọ omenala ụlọ ọrụ, nke bụ isi ụlọ ọrụ maka mmepe na -adigide. Mmepe ụlọ ọrụ, ọdịbendị ụlọ ọrụ bụ ihe achọrọ dị mkpa maka ọkwa ụfọdụ, asọmpi nke ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ bụ otu n'ime asọmpi, mana ndị mmadụ na -adabere n'ọdịbendị ka ha dịrị n'otu, ụlọ ọrụ da da wuru gburugburu ọdịbendị nụchara anụcha, kwalite mmụọ Hongda, mebe azụmahịa dị mma. Gburugburu ụlọ ọrụ n'ime imepụta ihe dị mma, na -aga n'ihu, ịrụsi ọrụ ike na ikuku, dabere na nke ha, ịrụ ọrụ ha.
Mmụọ nke ụlọ ọrụ: ezi okwukwe. * Ihe ọmụma ọhụrụ ewepụtara
Nkà ihe ọmụma azụmahịa: onye ahịa, ahịa
Echiche ahia: imepụta ọchịchọ na ijere obodo ozi
Chọtara Quanzhou Minzheng Transport Machining Plant
Chọta Quanzhou Hongda Machinery Co., Ltd.
Ngwaahịa ụlọ ọrụ batara n'ahịa ụlọ nke igwe injinia
Ngwaahịa nke ụlọ ọrụ batara n'ahịa Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia nke igwe injinia
Ngwaahịa ụlọ ọrụ batara n'ahịa Europe nke igwe injinia
Nweta aha ụlọ ọrụ emesi ike
Companylọ ọrụ ahụ mepere enyemaka Fujian Jia Machinery Co., Ltd.
Chọpụtara Trading Company Quanzhou Jinjia Machinery Co., Ltd.
A hụrụ Lianhe Heavy Industry Co., Ltd.